Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waa kuma - SomaliNet Forums
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed waa kuma
Joined: Mon Mar 30, 2009 8:51 am
Postby hadafou » Tue Jun 16, 2009 8:49 am
Waxa uu ku dhashay Mahaday, Shabeellaha Dhexe – Soomaaliya bishii Luuliyo 1964 kii. wuxuu ahaa madaxii midowga maxkamadaha islaamiga. wuxuu jaamacado ka soo dhigtay dalka Libiya iyo Suudan. wuxuu ahaa macallin dugsi sare ka dhiga juqraafi iyo carabi iyo culuumta diiniga ah. shiikh shariif wuxuu ku hadlaa luqadaha Carabiga Soomaaliga,Ingiriiska,italia,franca dutcht iyo duitch.
Sheekh Shariif wuxuu waxbarashadiisa ka bilaabay dugsiga shiikh suufi oo xiriir la lahaa jaamacadda Al-Azhar University ee dalka masar. ka dib wuxuu aaday wadanka suudaan wuxuu galay jaamacadda Kordufan University dhamaadkii 1992 kii. wuxuu ka qaatay shahaado bachelor ah ee luqadda carabiga iyo juqraafiga wuxuu ku qaatay magaalada aldalanj. 1994 waxaa jaamacadda magaceeda loo bixiyey University of Dalanj. shiikh shariif wuxuu tagay tripoli, caasimadda dalka liibiya. wuxuu galay jaamacadda Open University wuxuuna shahaado ka qaatay kulliyada qaanuunka iyo shareecada islaamka wuxuuna ka qalin jabiyey 1998 kii.
Waa kuma Shariif?
Shariif Shiikh Axmed, waa hoggaamiyihii Maxkamadaha Shareecada ee sannadkii 2006 ka talinayay gobollada Dhexe iyo kuwa koofureed ee Soomaaliya badankood, ka hor intii aanay dagaal ku qaadin xarunta dowladda oo markaa ahayd Baydhaba. Berigii ay Maxkamaduhu dagaalka kula jireen kooxdii la baxday Argagixisa la dirirka, Shariif Shiikh Axmed, waxaa uu lahaa taageerayaal aad u fara badan, gaar ahaanna waxaa si weyn looga taageersanaa magaalada Muqdisho xasilooni aan dhicin tan iyo intii ay khadka ka baxday dowladii kaligiii talis siyaad waxay maxkamaduhii uu shariifku hogaaminayey keeneen nabad.
Burburkii maxaakiimta islaamkabishii december 2006 markii maxkamadaha laga adkaaday lix bilood oo ay maamulayeen caasimadda iyo koofurta badankeed kadib wuxuu shiikh shariif go'aansaday inuu la sii dagaalamo ciimadii itoobiyaanka ee dalka ku soo duulay. awood u mayeelan iney mar kale dib u soo noqdaan shiikhu wuxuu markaa galay xuduuda kenya oo markaa isu dhiibay ciidamada kenya asiga iyo saddex nin oo kale bishii jannaayo isla sanadkii 2006 wuxuu kenya kula kulmay safiirka mareykanka waxayna ka wada hadleen arrimaha taageerada dowladda waxaa mudda lagu haayey hotel ku yaalla nairobi oo ay ciidamada kenya ku waardiyeynayeen ilaa bishii february markaa uu tagay dalka yemen oo la rumeysnaa iney joogaan saaxiibadiis maxaakiimtu. wuxaa uu xulufo la noqday asiga saaxiibka shiikh xasan daahir rag kaga soo tagay arima siyaasadeed dowladii TFGda magaalada casmara ee dadlka eretrie laguna aasaasay isbeheysi la yiraahdo (dib u xoreynta soomaaiya).
Qoyska shiikha iyo sifaadkiisa
shiikhu wuxuu leeyahay xaas iyo laba wiil axmed oo sagaal jir ah iyo c/llhi oo ka yar. shariifku waa nin naxariis badan dhalinyara ah jecel inuu isla simo dadka sida caadiga ah waa nin waji qurxan gar leh shaarub lahayn tinta waa gaabsadaa koofi ayuu xirtaa badanaa.
Doorashadii madaxtinimoshariifka waxaa soo sharaxday isbheysigii ARS ee uu hogaaminayey wuxuuna u muuqanayey ninka kaliyata ee hanan kara jagada ugu sareysa ee dowladda. markii ay bilaabaneysay doorashada waxaa tartanka kula jiray rag gaaraya ilaa (10)nin oo ka wada yimid dhanka dowladii TFGda ee uu hogaaminayey c/llhi yuusuf. wareegii ugu horeeyey waxaa ku soo baxay lix nin ee uu ugu horeeyo shariifku wuxuuna ka helay 215 cod halka rag ay kamid yihiin ay heleen raisal wasaarihii hore nuur cadde oo helay 59 iyo maslax oo helay 60 cod saddexda kale ayaa helay codad intaa ka sii hooseeya waana ay wada tanasuleen dhamaan marka laga reebo maslax oo ku adkeystay tartanka. wareegi ugu dambeeyey wuxuu shariifku kaga adkaaday doorashadi maslax wuxuuna helay 293 cod maalin kadibna waa loo caleemasaaray xilka madaxweynaha.
Waxaa laga keenay "http://so.wikipedia.org/wiki/Sheekh_Shariif_Axmed"
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed::sincere leaders
by yasmin muuse » Sun Jun 08, 2008 3:18 pm » in General - General Discussions
by hanad_mn View the latest post
Sun Jun 08, 2008 3:31 pm
Sheikh Sharif Sheikh Ahmed - 15 Apr 07
by STOP! » Wed Jul 01, 2009 7:02 am » in General - General Discussions
Wed Jul 01, 2009 7:02 am
by Nomand » Tue Feb 03, 2009 5:20 pm » in General - General Discussions
Tue Feb 03, 2009 5:33 pm
Sharif Sheikh Ahmed was defiant...
by Enemy_Of_Mad_Mullah » Sun Feb 18, 2007 2:48 pm » in General - General Discussions
Tue Feb 20, 2007 3:49 am
**Che Ernesto of Somalia; Sharif Sheikh Ahmed
by abdi ilyas » Wed Oct 01, 2008 11:32 am » in General - General Discussions
by Air Canada View the latest post
Thu Oct 02, 2008 3:29 am